Ọsịsọ, obi dị mfe ma dịkwa ụtọ - dị ịtụnanya Uche ọgụgụ isi - echiche maka ụlọ na ubi
Ngwa ngwa, dị mfe ma dị ụtọ, obi nwere mmetụta
31.01.2014 Bipụtara: Senti Art
Nhazi na cochọ Mma, Ngwa ngwa, dị mfe, na-atọ ụtọ!, Echiche Homelọ, Ntụziaka
Nke a bụ ihe dị mfe ma dịkwa ngwa iji dozie uzommeputa na ụdị nka na ịchọ mma. O kwesịrị ekwesị maka ihe ịtụnanya nke onye ị hụrụ n’anya, ọkachasị maka ezumike. Isi ihe bụ ụdị obi ị ga - eji zụta ihe eji eme ọla - silicone dị n’ime obi gị site n’aka ọtụtụ ndị na - ere ahịa ma ọ bụ na ị ga - e modelomi ihe dị iche iche iji kpuchie aluminom. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị zụta nke ejikere edozi maka na ọ ga-enyekwa gị uru n'ọtụtụ nri ndị ọzọ na-adọrọ mmasị, mana ọ bụrụ na ị kpebie imere onwe gị, buru ụzọ bepụ kaadiboodu gburugburu nke ị na-eme nnukwu obi nke nwere ọtụtụ akụkụ nke okpukpu kpuchiri okpukpu abụọ. Griza nke ọma tupu ọrụ. Niile ịchọrọ bụ mgwakota agwa ghere eghe na 500, ndochi nke nhọrọ gị na uto nke onye ahụ ga-eju gị anya (na nke a, chiiz na pasili, galiki na ngwa nri) na otu akwa eticha ya na ngaji 1. mmiri maka ịgbasa. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ndochi chọrọ ọgwụgwọ ọkụ ogologo oge, tụlee ya (ihe dị ka 25-30min.) Maka ịme achịcha ma kwadebe ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
nhazi, nri nka, nka Ezi ntụziaka, Ntụziaka ngwa ngwa, n'ụlọ Ezi ntụziaka, echiche, echiche maka valentines ụbọchị, echiche obi, forno nti .po Kɔkɔɔ no, mfe Ezi ntụziaka, obi achicha, ihe ịtụnanya ezumike, Ntụziaka, Ntụziaka maka ihe ijuanya, Dayno na meka ho asɛm, Ntụziaka maka achịcha puppy, Ntụ ọka eji esi nri dị ọtụtụ, mgwakota agwa ntụ ọka, Ntụziaka obi, Ezi ntụziaka, obi maka ubochi valentine, achicha obi, echiche maka ulo, ime ime, arịa ụlọ, n'ime ime, imewe echiche, ụlọ ọgbara ọhụrụ, icho mma, nka nka
Echiche maka icho mma ite
Nke a bụ ụfọdụ echiche na-atọ ụtọ maka otu esi eme ite akụ mara mma. Nlekọta ụcha ..
Ibe ihe ma obu nka bu ihe eji achọ mma
Etu ma obu uzo; Latin bu okwu eji arutu aka na ar ...
Rigatoni salted pasta achicha
Usoro nri onyinye dị ọtụtụ dị ka ọnọdụ ndị Italitali - ọ dị iche ...
Ihe ịchọ mma n’ubi ahụ bụ ihe kpatara ọtụtụ echiche na ụzọ esi agbanwe ihe. Dabere na ...
Echiche a na-egosi ụzọ dị ụtọ esi esi eghe poteto eghe & quo ...
Nkume ogige dị n’ubi
Ọtụtụ mmadụ na-akpakọrịta okwu nkume ubi na ebe nka na ubi nke na-emepụtagharị n'uche ...
Pot na-eme okpu site na karama rọba bụ ụzọ dị mma iji mepụta ...
Egosiputara n’ahịrị ndia n’edemede nke ite eji aka aka n’adighi n’iru ihe omuma.